Life Imikhiqizo Daily Ukusebenzisa Injection Molding Umkhiqizi - CBPMM
Isicelo Injection Molding
Umjovo udini iye yande futhi zisetshenziselwa yokukhiqiza ezihlukahlukene imikhiqizo okuyinto sisebenzisa ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Inqubo ivumela imikhiqizo yokukhiqiza ngobuningi nge.
Imikhiqizo nazo kakhulu eliqondile ezifanayo lapho ukuqinisekisa umkhiqizo kanye brand ukungaguquguquki. Utshalomali enkulu umjovo udini uku design umkhiqizo kanye okuklama of isikhunta ngemva kwalokho.
Uma lezi kuyaqedwa, kwakhiwa ungaqala lapho eliningi imikhiqizo ekhiqizwa okuletha phansi izindleko zokukhiqiza kakhulu.
Isikhathi ukukhiqizwa kwemikhiqizo Mancane futhi kakhulu okungenye inzuzo kohlelo yokukhiqiza. Ezinye ezivamile zokuphila zansuku zonke ezifana ifenisha, amathoyizi, izingxenye yezimoto, amadivaysi ezokwelapha, njll ekhiqizwa ngokusebenzisa umjovo ekubumbeni.
Izinzuzo Ukusebenzisa Plastic Injection Isikhunta for Ukukhiqiza Common Imikhiqizo
Plastic umjovo udini ingenye izinqubo kahle kakhulu yokukhiqiza imikhiqizo ofanayo wokuphila kwansuku zonke. Singase ungaqondi, kodwa iningi imikhiqizo yepulasitiki esetshenziswa yithi ekuphileni kwethu kwansuku zonke ekhiqizwa usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba.
Zikhona izinzuzo eziningi imikhiqizo yokukhiqiza usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba, ezinye izinzuzo ezinkulu kakhulu usebenzisa umjovo udini for yokukhiqiza imikhiqizo ezivamile zibalulwe lapha ngenzansi:
Umjovo udini kuyinto yokukhiqiza inqubo kuyaphindeka kakhulu. Uma umklamo umkhiqizo kanye isikhunta design seliqediwe, umjovo inqubo yokubumba angakhiqiza inqwaba umkhiqizo emfushane kakhulu nkathi.
Umjovo udini ingasetshenziswa akhiqize imikhiqizo engama ngokuphelele ezifanayo futhi uhambisane . Imikhiqizo ekhiqizwa cishe ayinamaphutsa kanye neqhaza ukungaguquguquki brand.
inqubo ukufakwa udini kwenza nokukhiqiza imikhiqizo fast kakhulu. Iningi isikhathi nezinto ezidingekayo imiklamo ukuze enze imikhiqizo umkhiqizo kanye isikhunta.
Uma lezi zici design uqedile, langempela senqubo yokukhiqiza kungenziwa ngokushesha inqubo umjovo ekubumbeni.
Omunye izinzuzo enkulu yokukhiqiza usebenzisa inqubo umjovo udini zalo -cost-ukusebenza . Ukukhiqizwa kwenziwa ngamanani amakhulu kakhulu ngisho nezigidi ezisiza ekunciphiseni izindleko zokukhiqiza.
Isikhunta efanayo ingasetshenziswa nokukhiqiza imikhiqizo ngobuningi, esehlisa ucezu ngayinye izindleko zokukhiqiza.
Imikhiqizo ekhiqizwa kusuka umjovo udini ninamandla futhi iqine. Le mikhiqizo enziwa isikhunta olulodwa ngakho Awunawo amalunga omzimba noma izingxenye buthaka. Inamandla nezokugcina isikhathi eside.
Umjovo udini futhi likuvumela unenkululeko akhiqize ezingaphezu kwesisodwa resin plastic njengoba izinto zokusetshenziswa. Umenzi Ungasebenzisa inhlanganisela amapulasitiki ukwenza umkhiqizo izinga okusezingeni eliphezulu.
Bangaphinde engeza fillers ngesikhathi yokukhiqiza ukwandisa amandla ukuqina umkhiqizo. Imikhiqizo ekhiqizwa futhi engasindi futhi ube ukumelana enhle kakhulu umthelela, ukushisa, kanye ukugqwala.
Izicelo ezivamile Injection Molding
Umjovo udini has izicelo eziningi ekuphileni kwethu kwansuku zonke. It is ngokuvamile kusetshenziswa ukwenza imikhiqizo okuyinto sisebenzisa nsuku zonke like plastic amabhodlela, ifenisha, amathoyizi njll
Imikhiqizo ekhiqizwa kusuka umjovo inqubo yokubumba kukhona engasindi futhi okuhlala isikhathi eside futhi. Le mikhiqizo kungukuthi jointed noma ashiselwe futhi akhiqizwa isikhunta olulodwa iqinisekisa amandla abo futhi nethonya elikhulu ukumelana.
Umjovo udini emakethe belilokhu landa kancane kancane futhi indlela elisebenza ngayo nako kuyanda kakhulu. Ezinye izinhlelo zokusebenza ezivamile yenqubo umjovo udini e imikhiqizo yokukhiqiza okuyinto sisebenzisa ekuphileni kwethu kwansuku zonke zimi kanje:
I yokukhiqiza ibhodlela le plastic kuyinto isicelo ejwayeleke kakhulu umjovo ekubumbeni. Amabhiliyoni amabhodlela epulasitiki ekhiqizwa ngonyaka.
I amabhodlela epulasitiki anesizotha ekhiqizwa usebenzisa polyethylene terephthalate (PET) njengoba kuba impahla engasindi futhi enamandla. Amabhodlela kungenziwa ekhiqizwa ezihlukile nosayizi bese ziphephile ukugcina kanye sokuphuza amanzi.
Izinto ezenziwe ngepulasitiki eligcina ukudla kanye non-ukudla izinto ekhiqizwa ngomjovo ekubumbeni. I izitsha kungenziwa ekhiqizwa ezihlukile nobukhulu.
Lezi nezipakupaku ziphephile ukugcina ukudla banganamukeli Leach iyiphi amakhemikhali ayingozi uma uhlangana nabo izinto zokudla.
Umjovo udini isetshenziselwa yokukhiqiza ifenisha plastic esetshenziswa ekuphileni kwethu kwansuku zonke. uhlobo oluhlukile ifenisha like itafula, izihlalo, senhliziyo njll oluqanjwe le nqubo.
Ifenisha ekhiqizwa engasindi futhi iqine futhi izindleko zokukhiqiza futhi kancane kakhulu.
Iningi amathoyizi wepulasitiki emakethe ekhiqizwa usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba. Amathoyizi ekhiqizwa ngokusebenzisa le nqubo kukhona engasindi, okuhlala, futhi ukugqwala ukumelana.
Amathoyizi ekhiqizwa usebenzisa elimbudumbudu firmer plastic okuyinto abathukuthelela baze ancibilike bese basuke injected isikhunta plastic. Uma plastic epholisa, kuthatha ukuma imininingwane isikhunta.
Amathoyizi Awunawo amalunga omzimba noma welds futhi ekhiqizwa lapho lihlanganiswa khona, isikhunta olulodwa, ngakho banamandla futhi okuhlala isikhathi eside.
Okufakiwe kuyinto isicelo ezivamile Umjovo udini. Isembozo imikhiqizo ukudla nezinye izinto ekhiqizwa usebenzisa muphi umjovo inqubo yokubumba.
Lokhu kusiza ukugcina fresh ukudla isikhathi eside futhi kuvimbela sokumosha ukudla. Iphinde ivikela umkhiqizo nemihuzuko, uthuthumele njll ayigcine iphephile ngesikhathi sezokuthutha umphakathi. Isidingo Imininingwane upakisha kusukela umkhakha umjovo udini kwaba 43.385 kilotons ngo-2016.
Imishini yezokwelapha ekhiqizwa ngenqubo umjovo ekubumbeni. Ukukhiqiza bemishini yezokwelapha ingenye izicelo ezanda Umjovo udini ukufakaza i wawuhlanganisa ukukhula inani lenzalo yonyaka enikezwa cishe 6%.
Ukukhiqiza bemishini yezokwelapha ngokusebenzisa le nqubo ivumela okwenza amadivayisi engasindi futhi kuvumela ngaphezulu okuklama.
Njengoba izindleko yokukhiqiza incane, amadivaysi kungenziwa ilahlwe esikhundleni lokuhlanzisisa kubo futhi usebenzise, ​​kanjalo nokunciphisa ingozi yokutheleleka nedivayisi ukulungiselela isikhathi.
Inqubo umjovo udini kabanzi ukwenziwa izingxenye yezimoto.
Inqubo yokukhiqiza awunankinga yokwenze embonini yezimoto edinga izingxenye futhi iingcenye ezingabonakaliko kakhulu eqondile neqhubekayo.
Izingxenye yezimoto ekhiqizwa usebenzisa inqubo umjovo udini kukhona engasindi okwandisa ukusebenza kahle nophethiloli.
Izingxenye namandla okuhle kanye nomthelela ukumelana okuyinto ebaluleke ukuqinisekisa ukuphepha imoto.